Haweeney: Dawadii waxtarkeeda la igu tijaabiyay ayaa "la ii diiday" markaan u baahday - BBC News Somali
Haweeney: Dawadii waxtarkeeda la igu tijaabiyay ayaa "la ii diiday" markaan u baahday
"Waa ay adag tahay in la liqo. Waxaan filayaa markii iigu badneyd waxaan hal mar laqay afar xabbo kaniinkaasi ah. Intaa ka badan waan liqi waayay oo sanka ayaan ka keenay."
"Dabcan waxaan ku noolahay khuraadta iyo waxyaabaha kale ee cagaarka ahi," ayay tiri.
"Waxaan isku dayaa in aan aad uga fogaado in cunno aan la wadaago dadka aanan aqoon," ayay tiri Louise. "Waxaa laga yaabaa in ay arkaan aniga oo mararka qaar la soo baxaya miisaanka aan ku cabbiro borootiinka ku jira cunnada aan rabo in aan cuno ama xitaa mararka qaar waxaan iska celiyaa cunnadii la ii keenay ama wakhti dheer ayay igu qaadataa in aan dalbado nooca cuntada aan u baahanahay."
"Sababta aan tijaabadani uga qeyb qaatay waxay ahayd in haddii dawadani ay shaqeyso ay nolasheyda waxbadan ka badali doonto,'" ayay tiri.
"Dawada Kuvan ayaa ii suurtagelisay in aan si caadi ah u cuno cunnooyinka. Waxay ahayd sida aniga oo billaabay nolol cusub oo wax kastaa caadi ayay ii ahaayeen," ayay tiri Louise. "Aad ayay dawadaasi ii caawisay."
"Maadaama tijaabadii lagu guuleystay oo horumar weyn laga gaaray dawadaasi, waxaan isku qanciyay in muddo yar ay iga xigto isticmaalka dawadan oo waxa ay noqon doontaa mid qof kastaa uu heli karo," ayay tiri Louise.
"Dawadani aad ayay qaali u ahayd, waxaana adeegga daryeelka caafimaad ee Britain uu go'aansaday in aysan jirin caddeymo dhab ah oo muujinaya in dawadani ay waxtar u leedahay bukaanada qaba xanuunka PKU, marka waxay amreen in dhakhaatiirtu aysan u qorin bukaanka," ayay tiri Prof Anita MacDonald.
"Arrin adag ayay igu noqotay oo waxaa khasab noqotay in aan mar kale dib ula qabsado," ayay tiri. "Saameyn weyn ayay arrinatasi igu yeelatay."